Mitemo yebasa - Dhizaina Dhizaina
Iyi webhusaiti inoshandiswa ne Designer Spot. Munzvimbo yese saiti, mazwi ekuti "isu", "isu" uye "edu" anoreva Mugadziri Spot. Designer Spot inopa ino webhusaiti, kusanganisira ruzivo rwese, maturusi uye masevhisi anowanikwa kubva kuno saiti kwauri, mushandisi, wakagadziriswa pakubvumidzwa kwako kwese mazwi, mamiriro, marongero uye zviziviso zvakataurwa pano.
Nokushanyira nzvimbo yedu uye / kana kutenga chimwe chinhu kubva kwatiri, unobata mu "Basa" redu uye unobvumirana kuva akasungwa nemitemo nemitemo inotevera ("Mitemo yeBasa", "Magwaro"), kusanganisira iyo mamwe mazwi nemitemo uye mitemo rinotsanangurwa pano uye / kana inowanika ne hyperlink. Iyi Mitemo yeBasa inoshandiswa kune vese vashandisi vepanzvimbo, kusanganisira pasina vamiririri vashandisi vashandisi, vatengesi, vatengi, vatengesi, uye / kana vatsigiri vehupenyu.
CHIKAMU 5 - ZVINHU ZVINOGONESA KANA KUDZVARA
Zvese zvigadzirwa zvedu ndezve Master Kopi nekubvuma kune ino temu iwe unobvuma kuti izvo zvigadzirwa zvauri kutenga zvakafanana. Zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi anogona kuwanikwa chete online kuburikidza newebhusaiti. Izvi zvigadzirwa kana masevhisi anogona kunge aine hushoma huwandu uye ari pasi pekudzoka kana kuchinjanisa chete zvinoenderana neKudzoka kwedu Policy.
Hapana mamiriro ezvinhu kana Designer Spot, madhairekitori edu, maofficial, vashandi, vanobatana navo, vamiririri, makondirakiti, vadzidzi vepo, vatengesi, vanopa masevhisi kana marezinesi vachinge vaine mhosva yekukuvara, kurasikirwa, kudaira, kana chero chakanangana, chisina kunangana, chinoitika, chirango, chakakosha, kana zvinokuvadza zvinokanganisa zvemhando ipi neipi, kusanganisira, pasina muganho wakarasika purofiti, kurasikirwa nemari, kurasikirwa nemari, kurasikirwa kwedata, kutsiva mari, kana chero kukuvara kwakafanana, kungave kuri muchibvumirano, tort (kusanganisira kusaremekedza), mutoro wakasimba kana zvimwewo, zvinobva kushandisa kwako chero sevhisi kana chero zvigadzirwa zvakawanikwa uchishandisa sevhisi, kana kune chero chimwe chikumbiro chine chekuita neimwe nzira pakushandisa kwako sevhisi kana chero chigadzirwa, zvinosanganisira, asi zvisingagumiri, chero zvikanganiso kana kusiiwa mune chero zvirimo, kana chero kurasikirwa kana kukuvara kwemhando ipi neipi yakawanikwa nekuda kwekushandisa sevhisi kana chero zvemukati (kana chigadzirwa) zvakatumirwa, kutumirwa, kana neimwe nzira kuitiswa kuburikidza neshumiro, kunyangwe kana vakarairwa nezve kugona kwavo. Nekuti mamwe matunhu kana masimba haatenderi kubviswa kana kuremerwa kwechikwereti chekukuvara kwakakomba kana kwakangoitika, mumatunhu akadaro kana masimba, mutoro wedu unozogumira padanho rakakura rinotenderwa nemutemo.
Unobvuma kuregerera, kudzivirira uye kubata zvisina njodzi Mugadziri Spot uye mubereki wedu, vanobatsirana, vanobatana, vatinoshanda navo, maofficial, vatungamiriri, vamiririri, makondirakiti, vanopa marezinesi, vanopa masevhisi, vashandirapamwe, vanotengesa, vashandi nevashandi, vasingakuvadzi kubva kune chero chirevo kana kudiwa, kusanganisira mubhadharo wemagweta anonzwisisika, anoitwa nechero wechitatu-bato nekuda kwekukwira kana kutyora kwako kweMitemo yeBasa kana magwaro avanobatanidza nereferensi, kana kutyora kwako chero mutemo kana kodzero dzechitatu-bato.
Aya maSevhisi eSevhisi uye chero zvibvumirano zvakasiyana izvo zvatinokupa iwe maSevhisi anozotongwa pamwe nekufungidzirwa zvinoenderana nemitemo yeDubai marina Dubai Dubai AE 282370.
Mibvunzo nezve iyo Terms of Service inofanira kutumirwa kwatiri ku info@dznrspot.com.